वाईफाई वा मोबाइलमा डाटाको गति स्लो भए के गर्ने ? - Gaunbeshi
Posted on २६ आश्विन २०७७, सोमबार १३:१९ Author Gaunbeshi Comment(0)
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको कारण लगाइएको लकडाउनपछि धेरै मानिसहरु अझैपनि घरबाट नै काम गरिरहेका छन् भने अनलाइन कक्षा समेत सचालन भईरहेको छ ।
-सबैभन्दा पहिले कुन प्रकारको राउटर चाहिएको हो पत्ता लगाउनुपर्छ । बजारमा सामान्यतया दुई प्रकारका राउटर खरिद गर्न पाइन्छ–डीएसएल र एडीएसएल । -नेपाल टेलिकमको सेवा लिने हो भने एडीएसएल अन्य सेवा प्रदायकको इन्टरनेट जोड्ने भने एडीएसएल राउटर खरिद गर्नुपर्छ । -मूल्य अनुसार गुणस्तर पनि निर्धारण हुन्छ । बजारमा १५ सय देखि ४० हजार रुपैंयाँ सम्मका राउटर […]
काठमाडौं। एप्पलले एक भर्चुअल इभेन्टमार्फत् नयाँ मोडल्स आइफोन-१२ र आइफोन-१२ मिनी लञ्च गरेको छ। यी दुवै मोडल्समा एप्पलको ए १४ बायाेनिक प्रोसेसरको प्रयोग गरिएको छ। यो ५ एनएम प्रोसेस बेस्ड चिप हो। र, पफर्मेन्सको आधारमा यसलाई ए१३ भन्दा राम्रो मानिन्छ। प्रत्येक वर्ष नयाँ आइफोन सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक हुने गरेको थियो। तर यो वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका […]
आईफोन ट्वेल्भ आज सार्वजनिक हुँदै, यसरी हेर्नुहोस् लाइभ इभेन्ट
Posted on २७ आश्विन २०७७, मंगलवार १०:०८ Author Gaunbeshi
काठमाडौं । आज बेलुका एप्पलको भर्चुअल इभेन्ट हुँदैछ । उक्त कार्यक्रम मार्फत आईफोन ट्वेल्भ सिरिज सार्वजनिक हुने चर्चा चलिरहेको छ । साथै एप्पलले नयाँ एप्पल टिभी स्ट्रिमिङ बक्स, एयरपड्स स्टुडियो, एयर ट्याग्स, होमपोड स्मार्ट स्पिकर लगायतका उपकरण पनि सार्वजनिक गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएकाे छ । एप्पल इभेन्ट कसरी हेर्ने ? एप्पलले आफ्नो इभेन्ट प्राय: यसको […]
सैफ अली खान ८ अर्बको महल बस्छन्
Posted on ३ कार्तिक २०७७, सोमबार १६:३३ Author Gaunbeshi
Posted on २६ भाद्र २०७६, बिहीबार ०७:४७ Author Gaunbeshi
Posted on ११ कार्तिक २०७७, मंगलवार ११:१२ Author Gaunbeshi